सुन काण्ड र लोकमानको साइनो « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : १७ जेष्ठ २०७५, बिहीबार २२:४०
यही विषय त्यतिबेलै सप्रमाण हेडक्वार्टरमा पुगेको थियो । आइजिपीले कारवाही गर्ने बचन पनि दिएका हुन् । लोकमानको त्रासले यो कुरा सम्भव भएन । तर, अहिले गठित ईश्वर पौडेलको आयोग शायद लोकमानको भूतसँग नतर्सिएला । के त्यो आयोगले लोकमानलाई तान्ने हिम्मत राख्छ ? अनि प्रचण्डे, केपी, शेरे, सुशीललाई जेल हाल्छु र म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनी डुक्रँदै समानान्तर सत्ता चलाउने लोकमानलाई यस प्रकरणमा अँठ्याउने हिम्मत यो सरकारसँग छ ? हेर्दै जाऔँ…!